Windows7နှင့် Multi Booting
Windows7နှင့် Multi Booting
Thread: Windows7နှင့် Multi Booting
01-02-2010 03:22 PM #11
ပြန်စာ -> Windows7နှင့် Multi Booting
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်စက်မှာတင်ထားပါတယ်။ x86_64 fedora 10 စနစ်ကိုတင်ထားတာပါ။ ဆိုလိုတာက ၆၄ ဘစ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့စက်တွေပေါ်မှာပဲ တင်လို့ရတဲ့ စနစ်ပါ။ သူ့အတွက် partition ကသပ်သပ်လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ swap partition ပါထည့်ချင်ရင်တော့ windows ကတစ်ခု fedora ကတစ်ခုပဲတင်လို့ အဆင်ပြေပါမယ်။ swap ကလည်း primary partition ဆိုတော့ အားလုံးပေါင်းရင် primary partition3ခုပြည့်သွားလို့ပါ။ harddisk တစ်ခုမှာ primary partition4ခု ဒါမှ မဟုတ်ရင် primary partition3ခုနဲ့ logical partition တွေပဲ ထားလို့ရလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် OS တွေရဲ့ တစ်ချို့ အပိုင်းတွေကိုမသုံးဘူး ဆိုရင်တော့ logical partition ပေါ်မှာ windows XP တော့ တင်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ logical ပေါ်မှာ တင်ရင် windows7ကို activation လုပ်လို့ မရလို့ မတင်တာပါ။
တင်ချင်ရင်ဘယ်လို ပုံစံ တင်ရမလဲ ဆိုတော့
ပထမ system partition (Primary Partition) ကို2G လောက်နဲ့ ထားပါ။
ဒုတိယ Logical partition မှာ windows XP တင်ပါ။ ( Windows7ကိုတော့ Logical Partition ပေါ်မှာ တင်မကြည့်ဖူးပါ။ virtual disk file ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။)
တတိယ swap partition
စတုတ္ထ EXT3partition (for fedora root)
အဲဒီလိုဆိုရင် swap partition ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်။ fedora အတွက် swap partition က မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူက windows မှာ page files နဲ့တူပါတယ်။ အဲဒီလိုတင်ရင် fedora boot loader နဲ့တင် နှစ်ခုလုံးကို boot တက်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ swap partition မပါ ပဲတင်ထားတာပါ။
ပထမ system partition (Primary Partition) ကို 20 G နဲ့ Windows764 Bit တင်ပါတယ်။
ဒုတိယ primary partition ကို Windows XP 32 Bit &amp; 64Bit အတူတူတင်ထားပါတယ်။ ( အဲဒီအတွက် တစ်ချို့ Application တွေသုံးလို့ အဆင်မပြေပါ။)
တတိယ က logical partition ပါ။ အဲဒီထဲမှာ Windows732 bit ကို virtual disk file (*.vhd) မှာတင်ပြီး boot တက်နိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး hard disk free space ကို fedora တင်လိုက်ပါတယ်။
The Following User Says Thank You to herzcthu For This Useful Post:
02-21-2010 02:43 PM #12
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် စက်မှာလည်း windosXP,7,ubuntu တင်ထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် အားလုံးတင်ပြီးတဲ့အခါ ubuntu grub loader က windows7ကိုဝင်လိုက်ရင်
starting up...ဆိုပြီးရပ်နေပါတယ်။7 ခွေထည့်ပြီး start up repair လုပ်လည်းဘာမှ မထူးဘူးဗျ။ubuntu က 8 ကော9ပါ အဆင်မပြေတာပါ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပေးပါဦး။
02-21-2010 04:56 PM #13
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> Windows7နှင့် Multi Booting
[quote author=minthitpaing link=topic=6115.msg46155#msg46155 date=1266740019]
Ubuntu Bootloader ကို မသုံးဘဲ Acronis Boot Loader ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါလား။ နောက်တစ်ခုက linux base OS တွေသုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ boot loader အတွက် bootsector ကို သူ့ partition မှာပဲထားပေးပြီး သုံးမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ Hardisk ရဲ့ MBR မှာသွားရေးရင် Windows7လို OS တွေ Boot မတက်နိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်နည်းကတော့ windows7ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Vista Boot Loader ကိုသုံးပြီး Boot တက်ခိုင်းတာပါ။ သူ့ ထဲမှာ Ubuntu အတွက် boot loader option ပါထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ CMD ကိုသုံးပြီး boot option မှာ Entry တွေ ထပ်ထည့်တဲ့နည်း နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။ အဲဒါကခက်တယ်ဆိုရင် GUI သုံးထားတဲ့ Nero smart က ထုတ်တဲ့ Easy BCD boot loader ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးရင်တော့ Linux base ရော Mac ရောပါ။ windows7ရဲ့ Boot Loader options မှာထည့်လို့ရတယ်။ လွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်။ &lt;a href=&quot;http://neosmart.net/downloads/softwa...�ာ&lt;/a&gt; သွားယူလိုက်ပါ။ အလကားရပါတယ်။ သုံးကြည့်ပြီး အဆင်မပြေတာရှိရင် ပြန်မေးလို့ရပါတယ်။
04-19-2010 10:29 AM #14
ကွန်ပျူတာကို keyboard မသုံး mouse မသုံးပဲ microphone နဲ့ အိပ်နေသုံးလို့ရပြီနော်.
* (၁) start &gt;&gt; control panel &gt;&gt; Ease of Access ကို ရွေးလိုက်ပါ .
* (၂) speech recognition &gt;&gt; set upamicrophone ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
* (၂) start &gt;&gt; control panel &gt;&gt; Ease of Access &gt;&gt; start speech recognition ကိုရွေးလိုက်ပါ .
* (၄) start &gt;&gt; control panel &gt;&gt; Ease of Access &gt;&gt; speech recognition ကိုရွေးလိုက်ပါ
* (၆) အားလုံး အိုကေပြီ ကိုယ့်အသံကလဲ အသံနေအသံထားမှန်ပြီဆိုရင်တော့ ဖြင့် အပေါ်က ပထမနည်းအတိုင်း အသံကို On ထားလိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ အားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပြီး မိုက်ပုံစံလေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Off ကနေ On ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် . ကဲစပြီးတော့ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . မနက်ကျရင် ကျွန်တော် movie နဲ့ပြန်ရှင်းပြပါ့မယ် . ဒါပေမယ့်လွယ်ပါတယ် . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . အရင်ဦးဆုံး start ဆိုပြီးတော့ မိုက်နဲ့ ပြောကြည့်လိုက်ပါ . start menu bar တက်လာရင်တော့ အဲ့ဒါ အဆင်ပြေသွားပါပြီ ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ အသံမှန်အောင် လေ့ကျင့်ပြီး ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းလို့ရသွားပါပြီ ....
သိချင်လွန်းလို့ ရှာရင်း ရှာရင်း နဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စက်ထဲက တွေ့လာတာလေးပါ ....
[move]ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရ ခင်မင်လျက် ... Pooh ကောင်လေး... :imm: [/move]
The Following2Users Say Thank You to pooh.kglay For This Useful Post:
06-15-2011 01:35 PM #15
window vista ကနေ window7ပြောင်းတင်လိုက်တယ်. window vista က window old အနေနဲ့ ကျန်နေပါတယ်.
ကျွန်တော်က window နှစ်ခုလုံးကိုdual boot အနေနဲ့ သုံးချင်ပါတယ်
ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ် .window7ပဲသုံးလို့ရတယ်. vista ကို ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
Last edited by Talathor; 06-15-2011 at 01:38 PM.
By tma in forum အခြားအခက်အခဲများ
MOVED: booting windows 7
By phoelapyae in forum Operating System